Vhidhiyo 2 - Kurara kwepabonde (Chikamu 2). | KUSVIRA
Vhidhiyo 2 - Kurara kwepabonde (Chikamu 2).
Vhidhiyo 2 - Yevacheche Gender Dysphoria
Tsanangudzo yeKusangana Kwepabonde. (Chikamu 2)
Zvino, zvakajairika sei? Nezviuru zvaendeswa kumakiriniki echikadzi. Zvakajairika sei? Ndakanotora kubva kune iyo DSM, iyo yekuongorora uye yesayenzi bhuku pamberi, kune tsananguro. Heano zano ravo. Uku ndiko kugumisa kwavo kwesainzi kweichi chino chevakuru. Vanoti kupinda kwevakuru kumakiriniki echikadzi kunobva ku0.005 kusvika ku0.014 muzana yevanhurume vakuru vanozviona sevakadzi uye 0.002 kuenda ku0.003 muzana yevakadzi vanozivisa sevarume.
Nekudaro, uku ndiko kutaura kweDSM, kuri kuita chirwere chakawanda kwazvo. Nekune rimwe divi, chirongwa cheSafe Safe change chichizivisa kuti zvikamu zvina kubva muzana zvevana, kureva mumwe muvana makumi maviri nevashanu vaitambura neGender Dysphoria. Vakauya sei nehuwandu ihwohwo? Zvakanaka, vanoita sekudaro, uye ini handizive, ini handisi kuvanzika kune zvavanofunga kana kuronga, asi zvinoita sekuti ivo vakavakira izvi paongororo yevachiri kuyaruka muNew Zealand umo vechidiki ve8,166 vakabvunzwa mibvunzo. Vakabvunzwa, "Iwe unofunga kuti uri transgender here?" Ipapo vaifanira kutsanangura izvozvo. “Izvi zvinoreva musikana anonzwa kuti angave ari mukomana kana mukomana anonzwa kuti anofanira kunge ari musikana. Uri kuzvinzwa here? ”Zvino, kungoisa izvi mumamiriro ezvinhu, kuongororwa chaiko kwakaziviswa neDSM ndekwekuti panofanirwa kuve nekurapa uye kusarongeka kwekurwara kwehutachiona kwemwedzi mitanhatu. Mune izvi, iwe wanga uchingobvunza vechidiki ava. Iwe unombofunga iwe ungadaro uri musikana here? 94.7 muzana yakati, "Kwete, ini handina kumbobvira ndine dambudziko iri." 1.2 muzana yakati hongu. 2.5 muzana vakati havana chokwadi. Uye 1.7 muzana yakati, "Zvakanaka, isu hatinzwisise mubvunzo."
Saka, zvinoita sokunge kuti inouya ne4 muzana, izvo zvinonzi Zvikoro Zvakachengeteka, ndezvekuti ivo vakawedzera izvo hongu nevasina chokwadi uye vakauya nehuwandu hwemashiripiti, 4 muzana, iyo ikozvino yakagadzirwazve zvisina tsarukano sekunge Chokwadi chebhaibheri.
Zvino, zvakanaka sei izvo mibvunzo yemubvunzo? Vazhinji vanhu vanokahadzika kwazvo pamusoro pemibvunzo yekugovera kune vayaruka. Semuenzaniso, mune iyo imwechete, iyo yakafanana ongororo yavakaona seyakavimbika kune vamwe vanhu muAustralia, yakavabvunza nezvekuzvikuvadza. Mune gore rapfuura wakambozvikuvadza here? 23.4 muzana yakati, "Kwete." 45.5 muzana yakati, "Hongu." Asi heino nub yemubvunzo. 23.7 muzana yakaverengerwa kuti Havana kunzwisisa mubvunzo.
Vechidiki vechidiki veNew York vanogona kunge vasingazivi mutauro wechirungu zvekuti havanzwisisi mubvunzo wakadai? Kana kuti zvinoreva here kuti vari kungobhururuka nechinhu ichi uye vachiita tiki, uye, saka, une chokwadi sei mubvunzo wekuti unonzwa uchitambanuka here kana kwete. Nekudaro, ini ndinofungidzira kwazvo pamusoro pegumi muzana, kunyangwe yakanyorwazve svumbunuro, uye inodzokororwa zvakare senharo yekuti mana muzana, mumwe muvana makumi maviri neshanu, muzvikoro zveAustralia vari transgender uye nekudaro, tinofanirwa kutarisa Mushure me uye chengetedza kubva pakudheerera, uye isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti kune zvakakosha zvimbudzi uye zvese izvi mhando zvinhu.
Tichasvika kune imwe kurapwa iyo vana vanogona kutungamira ivo muminiti kana zvakadaro, asi pane imwe huru yekuvimbisa mhedzisiro kubva kune izvo zvirevo. Nei zvakadaro? Nekuti vamwe vanhu vakataura kuti mwero wekuwana pamusoro peiyi kuvhiringidzika uri muchokwadi kwazvo. Saka, tiri kutaura nezvei? Vari kuti uya wemakumi maviri neshanu, mana muzana. Asi zviverengero zvepamutemo zvinoti, zvakanaka, chinamira pane yechipiri chisingaperi. Iyo DSM pachayo inotaura kuti mwero wekushingirira pamwe nekuvhiringidzika kubva pa2.2% uchienda ku30% uye kuti 12% uchienda ku50% muvakadzi vechisikigo.
Mune mamwe mazwi, izvo zvavari kutaura ndezve, kunyangwe vangave nevhiringidzi yevakadzi, ivo vari muchokwadi, vachakura kubva mazviri. Iyi ndiyo hombe yekutora kumba. Haisiri iyo DSM chete, asi mune zvese mareferensi ayo akanyorwa. Uye hazvisi mareferenzi angu. Zvese mareferensi zviri kusimbisa kuti ruzhinji ruchakura kubva izvi kuburikidza nekuyaruka, chero bedzi iwe usingavhiringidze iwo.
Zvino, ichi chivimbo chakatonyanya. Kana zvirizvo ndezvekuti kune 4 muzana vanovhiringidzika uye kana izvo zvichidonhera ku0.002%, iro irikureti kurapa kuri kupfuura kwatosimbiswa. Masvomhu ekuenda kubva ku4% uchidzika kusvika pa0.002% zvinoreva kuti 99% yevana ava, zvichienderana nehuwandu hwavo, vachakura kubva pane izvi. Mune mamwe mazwi, dzokorora kubatana kwavo kwepanyama.
Kenneth Zucker aive mutungamiri wechirume dysphoria kiriniki muToronto. Pakanga pasina vana vazhinji vakabatanidzwa mune izvo, asi iye aive mumwe wevaridzi vepfungwa iyi kuti ruzhinji ruchapora. Ivo vari kuzoshongedza kurara kwavo kwekuzvarwa uye kwavo kwakakodzera chitupa kuzivikanwa. Vazhinji vacho. "Vamwe vacho," akadaro. "Vashoma, zvisinei, vanozozvibata zvakare nebonde ravo, asi vanozoita ngochani."
Vazhinji vachange vachidzokera kumurume nemusikadzi uye vanochata. Vashoma vacho vanozopedzisira vaita sevamwari venhumbu asi hunhu hweungochani. Akati. "Chokwadi hupenyu seungochani hauna kuomarara saka kungosarudzika neupenyu hwemwana anochinjika anoiswa kurapwa kwese kwehomoni nekuvhiyiwa uye kuzvipira kwehupenyu hwese pakurapwa kunobatanidzwa."
Saka, chii chatataura nezvacho? Takatarisa pachiitiko cheizvi. Isu takatarisa kuvimbiswa kweizvi uye isu tatanga kutarisa izvi sedambudziko repfungwa. Naizvozvo, hazvifanirwe kusanganisira, hazvifanire kutungamira, kupinda mukati medzimwe pfungwa nemuviri izvo nzira yekurapa, yatiri kutaura nezvayo inosanganisira.
Vhidhiyo 2 - Yevacheche Gender Dysphoria - Tsanangudzo Yekusangana Kwepabonde. (Chikamu 2) Dzvanya> Kuti Dhawunirodha iyo PDF pano.